လင်ငယ်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ မိန်းမကို လင်ကြီးက စောင့်ဖမ်းကာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်တိုက်ပြီး တူနဲ့ထု – Maharmedianews
လင်ငယ်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ မိန်းမကို လင်ကြီးက စောင့်ဖမ်းကာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်တိုက်ပြီး တူနဲ့ထု
အင်း တောင်ငူ ကေတုမတီမြို.သစ်က ကြွေသီးနဲ့ရိုက်သတ်တဲ့ ၂ လောင်းပြိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်ပြီးတော့ “ဆိုင်ကယ်နဲ.တိုက်ပြီး တူနဲ.ထုပြီး သတ် တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်” ဆိုပြီး ထပ် ထွက်လာတော့မလို. တော်သေး ကိုယ်တွေက ဗီဒီယိုမရိုက်ဘဲ လူဝင်ကယ်တဲ့သူမလို. /
သင်္ကြန်အကျနေ.မှာ အိမ်ဘေးက(တောင်ငူ ကေတုမတီမြို.သစ်ဘက်မှာခင်ဗျ အရင် တခါ ကြွေသီး ၂လောင်းပြိုင် နားနဲ.ဆို ၂လမ်းပဲဝေးတယ်) အ ဆောင်မှာ လင်ငယ်နဲ.လာပီး ဖောက်ပြန်နေတာကို လင်ကြီးက စောင့်ဖမ်းတာ လင်ငယ်က ထွက်ပြေးတာ မြန်ချက် ဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမကို လင်ကြီးက ဆိုင်ကယ်နဲ.လိုက်တိုက်ပြီးလဲ ကျ သွားတော့ တူနဲ.ထုသတ်တာ နားထင်တချက် မျက်နာတချက် သွေးတွေမြင်မ မ ကောင်းဘူး
ကိုယ် တွေက ထွက်ကြည့်တော့ … လင်ကြီးက ထုသ တ်နေတာရုတ်တရက် ရပ် သွားတုန်း ကောင်မ လေးက အတင်းထပီး အိမ်ထဲဝင် ပြေး လင်ကြီးက လည်း အိမ်ထဲထိပြေးလိုက် ပေမဲ့ ကိုယ် တွေအ ဖေက ၀ါးရင်းတုတ်နဲ. ၀င် တား တော့ လင်ကြီးက မဆိုင် သူမပါနဲ. နော် ဆိုတော့ ကိုယ် တွေက သူ.ထက် ၃ဆ လောက်ရှည်တဲ့ ဓားသံတုတ် နဲ. ထွက်လာ တော့ လင်ကြီး တိတ်သွားတယ် ( အမှန်က ကိုယ် တွေက သရက်ပင် ရွှေ.စိုက်ဖို. ကိုင်ထားတာ 😛 )
လင်ကြီးက တော် တော်ကြေ ကွဲ နေတာ သူ တသက်လုံး ရှာ ဖွေပြီးအလုပ်လုပ်နေတာ က လေးကလည်း၂ ယောက်ရှိတယ် အဲ့ဒါကို ဒီ ကောင်မလုပ်ရက်လိုက်တာတဲ့ သူ.ကို သတ်ပြီး ထောင်ထဲဝင်မလို. ဆိုဘဲ နောက်ဆုံးရဲ တွေေ၇ာက် လာ သွေး တွေ ရေ ဆေးပီးတော့မှ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို.သတိရတယ်။ အင်း မေတ္တာတရား သစ္စတရား ကိုယ်ချင်းစာတရား တွေ တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်လာတဲ့ လူဘောင်အဖွဲ. အစည်းမှာ ကိုယ် တွေက တော့ လူ.အသက်တ ချောင်း ကယ်ဖူးသွားပီ / ဒီသင်္ကြန် အကျနေ.က တော့ ဘ၀ရဲ. အမှတ်တရ ဖြစ်သွားပါပေါ့လား။
Moe Yé Naing
← သင်္ကြန်လည်လို့ ဆိုပြီး ဖခင်က ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ (၁၅) နှစ် သမီးလေး သေဆုံး
စင်ပေါ်မှာ ရဲလေး သီချင်းဆိုနေချိန်မှာ စင်အောက်ကနေ အပီအပြင်ကဲနေတဲ့ သက်မွန်တို့ အဖွဲ့ရဲ့ ချစ်စရာ video လေး →